Etu esi eme ka mmiri tụfuo: ghọta echiche na usoro | ECommerce ozi ọma
N'ime e-azụmahịa, e nwere ọtụtụ ụzọ isi ree ngwaahịa. Nke kachasị, na nke na-abata n'uche mgbe niile, bụ inwe obere ụlọ nkwakọba ihe n'ụlọ, ma ọ bụ na mpaghara, ebe anyị nwere ngwaahịa ndị a zụtara n'aka anyị n'ịntanetị n'ụzọ dị otu a, mgbe ha nyere iwu, anyị nwere ike ịnwe ngwaahịa iji zipu ya. Ma enwekwara usoro ọzọ, dị ọnụ ala ma dịkwa mfe. You ma ka esi atụtu mmiri?
Ọzọ anyị chọrọ igosi gị ihe ihe na-akụda mmiri, olee uru na ọghọm dị na ya, ụdị ndị dị adị na otu esi adaba na mmiri. Anyi ka anyi bido?
1 Gịnị bụ nkụda mmụọ?
2 Ihe ọma na ihe ọjọọ nke dropshipping
2.1 Dropsdị nke mmiri mmiri
3 Esi tụlee
3.1 Họrọ ngwaahịa ịchọrọ ịrara onwe gị nye
3.2 Nyochaa asọmpi ahụ
3.3 Họrọ onye na-ebunye gị ihe iji tụfuo gị
3.4 Mepụta ụlọ ahịa na-ada mba
Gịnị bụ nkụda mmụọ?
Ndobe onwe bu usoro nke dabere na ahia nke intaneti ekwesighi inwe ngwaahịa. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị nweghịkwa ohere nkịtị iji chekwaa ngwa ahịa yana ị nweghịkwa nsogbu maka ịbuga ngwaahịa a, n'ihi na nke ahụ bụ ihe ndị ọzọ na-elekọta.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Ọ bụ ụzọ ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị mana ebe ụlọ ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ akụkụ ahịa a na o nwere ihe ị ga-eji ziga ndị ahịa ngwaahịa ha nyere iwu maka "ndenye aha" n'akụkụ gị iji ree ngwaahịa ha nwere.
Ohere azụmaahịa a nwere ọtụtụ uru maka ọchụnta ego, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido na azụmaahịa ọnlaịnụ na achọghị itinye ego nke ukwuu. Ma o nwekwara ọtụtụ ọghọm. Anyị maara ha.
Ihe ọma na ihe ọjọọ nke dropshipping
Ọ bụrụ n’ị gụọla ọtụtụ ihe gbasara ịda mba, ị nwere ike ịma ezigbo ihe na ọghọm banyere ụdị azụmaahịa a. Otu n'ime ezigbo ihe bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya ịghara itinye nnukwu ego ịchọta ebe ị ga-edebe ngwaahịa ma ọ bụ lekọta mbupu ahụ, ebe ọ bụ ndị ọzọ na-eme ya. Mbupu na-ekwe nkwa na 24-48 awa na imirikiti nke ikpe na i nwere akara mara otú ọtụtụ iwu na e debere na ole ị na-aga irite.
Ma, n'ọnọdụ ọrụ ahụ, ị ga-akwụ ụgwọ kwa ọnwa maka ya, nke na-adịkarịghị ọnụ ala dịka ị nwere ike iche. Na nke a, anyị ga-agbakwunye na ọnụahịa nke ngwaahịa ndị ahụ anaghị asọmpi, n'ihi eziokwu ahụ bụ na a na-ere ha oke ọnụ karịa ụlọ ahịa ndị ọzọ. Ma ọtụtụ oge ị nweghị ike ịtọ ọnụahịa ndị ahụ, yabụ na ị naghị eji aghụghọ ahụ egwu mgbe ị na-enye onyinye (ị ga-agbaso ihe guzobere na ịdapụsị).
Ọ dị mkpa ịtụle uru na ọghọm nke ịda mba iji mee mkpebi dị mma. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, anyị na-agwa gị ugbu a ụdị ọdịda ahụ dị.
Dropsdị nke mmiri mmiri
Ị ma nke mere e nwere ụdị abụọ nke dropshipping? Ọ bụ ihe mmadụ ole na ole na-amaghị ma na-anaghị achọpụta ruo mgbe ha malitere ime nyocha. Mana n'ozuzu, ị nwere ụdị abụọ:
Na intermediaries, nke bụ ụlọ ọrụ ebe ha na-enye gị, ọ bụghị naanị otu ngwaahịa, mana ọtụtụ, na ọtụtụ ụdị, ka ị nwee ike ịmepụta ụlọ ahịa nwere ọtụtụ katalọgụ maka ndị ahịa gị. Nanị nsogbu bụ na ị kpọtụrụ onye na-emepụta ya n'onwe ya, ma ọ bụ onye ọzọ bụ onye na-edozi n'etiti ha abụọ.
Enweghị ndị ogbugbo. N'okwu a, na-aga na "isi mmalite", na ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ịme ngwaahịa ndị a na-ere n'ụlọ ahịa gị (na-elekọta usoro ahịa ikpeazụ (mbupu ngwaahịa)).
Họrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ ga-adabere na ihe ịchọrọ ire na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na ihe ịchọrọ imefu, ebe ọnụego ga-adị iche.
Ọ bụrụ na mgbe ihe niile anyị gwara gị, ị kpebisiri ike ịnwale ya, oge eruola ka ị mara otu esi atụfu. Ọ dị mfe, mana n'otu oge ahụ ị ga-eleba anya n'akụkụ ụfọdụ nwere ike imetụta azụmaahịa gị.
Họrọ ngwaahịa ịchọrọ ịrara onwe gị nye
N'okwu a ị gaghị eche ọtụtụ, ebe ọ bụ na Mgbe ị hụrụ ndị na-eweta ngwaahịa na-enye nsụda, ị ga-eme mkpebi dabere na ihe dị: ihe eji egwuri egwu, uwe, ihe eji emeputa ihe ...
Nkwado anyị bụ na ị na-eme nyocha banyere ihe ndị na-ewu ewu, nke ihe kacha amasị gị, na ị họrọ ngwaahịa ndị ahụ ị ga-ere.
Nyochaa asọmpi ahụ
Ee, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere; Ikwesiri ịma onye ị na-asọ mpi na ihe ha na-eme iji hụ otu ị ga - esi merie ha ma si otú ahụ mee ka ndị ahịa ha bụrụ nke gị.
Maka nke a gbalịa ịhụ mgbasa ozi ha, nyocha ndị ahịa, SEO, nhazi ibe, wdg.
Ihe a niile ga - enyere gị aka ịhụ etu ha na ndị ahịa si emekọrịta ihe. Ọ bụghị banyere gị i copomi ha, mana maka imezi nke ahụ.
Họrọ onye na-ebunye gị ihe iji tụfuo gị
Ozugbo ị matara ngwaahịa a, Nweghị ike ịhọrọ onye na-eweta ọrụ nke ịchọtara. Have ga-ele anya n'ọtụtụ iji mara ọnọdụ ha na-enye gị: oge ​​mbupu, ụdị ndenye aha, ọnụego, wdg. Ihe a niile ga-emetụta mkpebi gị.
N'ezie, ọtụtụ ihe ha na-eme bụ ịtụrụ iji hụ etu usoro a ga-adị maka ndị ahịa.
Mepụta ụlọ ahịa na-ada mba
Nke a nwere ike ịdị nfe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị na-enye gị mmiri na-enyere gị aka. Iji mee nke a, anyị na-akwado ka inwee aha ngalaba nke gị ma mepụta ụlọ ahịa gị n'ịntanetị na ya. Ọtụtụ na-eji nyiwe dị ka Shopify (otu n'ime ndị kacha mara amara na nke zuru oke na ahịa).
Ndị na-eweta ngwaahịa ga-elekọta mbupu ngwaahịa ị na-ere. Mana ị ga-enwerịrị ike itinye onwe gị kpamkpam na usoro azụmaahịa. Ee, ịkwesịrị ịmalite imeziwanye ọnọdụ gị, SEO, mmekọrịta gị na ndị ahịa ... Ngwaahịa agaghị ere onwe ha; ị ga-akwaga ha naanị ị ga-eme ya.
Ka ị na-ere, uru ị ga-aba. Na mgbakwunye, ebumnuche gị mbụ kwesịrị ịbụ iji kpuchie ego ị na-ada nke ị na-akwụ site na ire ahịa kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ị mezuo nke ahụ, nke nta nke nta ị ga-arịgo, ma ee, ị ga-enweta elele.
N'ezie dropspịfu mmiri dị mfe, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekwukwa ya n'agbanyeghị ihe ndọghachi azụ nke omume a. Agbanyeghị na asọmpi na-arịwanye elu na nke a, ọ nwere ike ịbụ ụzọ iji banye azụmahịa e-azụghị itinye ego nke ukwuu na, ozugbo ị hụrụ etu usoro a dị ma ọ bụrụ na ọ bara uru, kwụsị ịhapụ onwe gị na ndị na-eweta ya ya n'onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Esi tụlee
Otu esi ere na Vinted